China Advertising 3d led acrylic tsamba yevagadziri vezvikwangwani zvechitoro uye vatengesi |Zhengcheng
Kushambadzira 3d led acrylic tsamba yechitoro signage
Iyo logo ruvara inogona kugadziridzwa.Iwo mavara e acrylic akagadzirwa kubva kunze kwenyika acrylic sheet, iyo inopesana ne deformation uye isiri nyore kupera.Yakajairwa blister midziyo ye blister, yakashongedzerwa nemhando yepamusoro LED mwenje sosi.
Zita rechigadzirwa: Led acrylic tsamba
Frame zvinhu: Yakatorwa kunze acrylic sheet
Zvakanakira led acrylic mavara
LED acrylic mavara ndeimwe yeanonyanya kufarirwa kunze zviratidzo nhasi.Inonyatsoratidza zita rechisiginecha, izvo zvinoita kuti zvive pachena pakungotarisa.Mufananidzo wakajeka, wakanaka uye wakajeka welogo uri nyore kuyeuka.Icho chimwe chezvinonyanya kushandiswa kunze kwezvivakwa zviratidzo.
Zvimwe zvitoro zvidiki pachiyero, saka unogona kushandisa led acrylic mavara sezviratidzo, izvo zvinoyevedza uye zvakanaka.Panguva imwecheteyo, kuiswa kuri nyore uye kwakakodzera.
Iwo akatungamira acrylic mavara haangogone kushandiswa chete mukugadzirwa kwezviratidzo, asi zvakare anogona kushandiswa sekushongedza kwemukati kuti uwedzere hunhu hwemhando.
Q1.Ndinogona kuva nemuenzaniso wekuraira?
Mhinduro: Hongu, tinogamuchira kurongeka kwemuenzaniso kutarisa uye kuedza kunaka kwechigadzirwa.
Q2.Iwe uri fekitori / mugadziri kana kambani yekutengesa?
Mhinduro: Isu tiri mugadziri anobatanidza R&D, dhizaini nekugadzira.Tine fekitari yedu.
Q3.Unorongedza sei chigadzirwa?
Mhinduro: Mukati ibhokisi rinodzivirira refuro uye katoni yakaparadzana, uye kunze kwakasimba huni kurongedza.
Q4.Ini handina mifananidzo, iwe unogona kundigadzirira here?
Mhinduro: Hongu, vagadziri vedu vachakugadziridza iwe zvinoenderana nezvaunoda kuita.
Q5.Ungawana sei mutengo wezvigadzirwa?
Mhinduro: Unogona kutumira ruzivo rwezvigadzirwa zvaunoda kuziva kune email yedu kana kubata maneja wekutengesa wepamhepo, isu tichakupindura nemutengo wakakodzera nekukurumidza.
Zvakapfuura: Tsanangudzo yepamusoro Signboard 3d - Kushambadzira 3d led acrylic tsamba yechitoro signage - Zhengcheng
Zvinotevera: Menu light box reresitorendi odha tafura
Blister Chiedza Bhokisi Signboard, Vacuum Kugadzira Chiedza Bhokisi Signboard, Supermarket Signboard, Kunze Kwechiedza Bhokisi Signboard, Pharmacy Signboard, Zviratidzo Zvakavhenekerwa,